Niklas Sule Hooyadeed Sheeko Xogta Wacan ee Xogta Lahaanshaha
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Niklas Sule Hooyadeed Sheeko Xogta Wacan ee Xogta Lahaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska "Niki". Naqshadeena Niklas Sule Carhood iyo wixii la mid ah Qodobbada Lahaanshaha "Biography" waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, taariikhda qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu yahay difaac difaac ah. Si kastaba ha noqotee, dhowr qof oo keliya ayaa ka fikira Niklas Sule's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Taariikhda Qoyska
Niklas Sulle wuxuu ku dhashay 3rd September September 1995 waalidiintiisii ​​Mr iyo Georg Sule ee Frankfurt, Germany. Niklas wuxuu ku dhashay Jarmal Jarmal iyo wiilkii labaad / cunugiisii ​​qoyskiisa. Hooyadiisa sawirkiisu waa sawir Jarmal ah halka aabihiis uu yahay Hungarian oo haysta baasaboor jarmal ah.
Sidee Sule's Famil u guuray Jarmalka:
Waxaa la aaminsan yahay in Ruushka Revolution of 1956 uu mas'uul ka ahaa samaynta Georg Sule iyo qoyskiisa u haajiray Jarmalka.
Jarmalka, Georg Sule oo laga helay jacaylka Niklas. Niklas laftiisa ayaa la rumeysan yahay in uu dhaxlay dhererkiisa iyo qaabkiisa weyn ee aabihiis. Labada waalidba marwalba waxay qabsadeen qoys qoys ah. Waxay weli ku nool yihiin Frankfurt, Germany halkaas oo ay wiilashooda ku dhasheen.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Nolosha Hore
Niklas wuxuu ku koray Frankfurt iyadoo uu ka weyn yahay walaalkiis Fabian kaas oo uu ugu magac daray "saaxiibo fiican"Xaqiiqda laga bilaabo maalmaha dhallinyarada ah.
Sida aad aragtay, Fabian sawirka kor ku xusan wuxuu dhererkiisu sarreeyaa marka la barbardhigo walaalkiis yar oo u muuqda. Tani waxay ku siineysaa inta ka dhiman xaqiiqda ah in Kubada cagta ay aragto mid muhiim ah walaalaha walaalaha ah ee yar yar dhowaan. Waa kiiskii walaalaha Milinkovic-Savic. Sergej Milinkovic-Savic waa dhererka, laakiin waayeelka, Sergej Milinkovic-Savic waa dhererka 1.92m / 6.2 halka walaalka walaalkiis Vanja Milinković-Savić uu yahay xNUMX m / 2.02.
Ku laabo Nolosha Hore ee Niklas Sule:
Kubadda cagta ayaa ka fiicnayd ciyaartoyda Niklas iyo wiilasha Fabian horaantii. Markaa ka dib, beerta deegaanka ee Walldorf ee Frankfurt, labaduba waxay ku qaadan lahaayeen saacado badan oo kubbadda cagta ah. Sida laga soo xigtay Niklas;
"Aabahay ayaa inooga dhigay inaan irid noo dhigo, mararka qaarkoodna beerta ayuu u waraabiyey. Tani waxay i ogolaatay aniga iyo Fabian inay kubada isku xertaan. Taasi waxay aheyd 'Anfield Road' "
Xittaa maalmaha todobaadka, saacadaha dugsiga ka dib, qadada ayaa la cunay si aad u dhakhso ah, wiilasha ayaa mararka qaar ka baxaya beerahooda gurigooda waxayna iskaga baxaan garoonka kubadda cagta ee ku yaal xaafada kore ee Walldorf.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Nolosha Mudnaanta Hore
Waqtiga ay socotay, wiilasha ayaa loo qeexay si buuxda. Nasiib darro, kubada cagta labadaba ma aysan tagin sidii hore loo qorsheeyay. Inkastoo Niklas uu sii waday sii kordhaya kubada cagta, taas oo Fabian uu hoos u dhacay. Waqtiga qaar, wuxuu marnaba dooneynin inuu sii wato kubada cagta sida waxbarashada loo qabtay. Fabian waxa uu sii waday in uu wax ka barto deeqda waxbarasho ee Maraykanka. Dabadeed, wuxuu sii waday inuu helo shahaadada Masterka ee Ganacsiga Caalamiga ah. Inkasta oo Niklas oo ahaa ciyaaryahan kubada cagta ah waligiis uu jeclaa buugaagtiisa sida uu walaalkiis sameeyay. Inkasta oo shaqooyin kala duwan loo yeeray, labadaba wiilasha weligood wey xusuusnaan doonaan maalmaha cayaaraha caruurta.
Niklas Sule ee kubadda cagta ayaa arkay isaga oo ku jira liiska kooxda dhalinyarada ee maxaliga ah, Rot-Weiß Walldorf taas oo siinaysay marxaladda aasaas hore ee mustaqbalkiisa. Xitaa tababarka kadib, Sule wuxuu sii waday inuu kubad ciyaaro si gaar ah.
2006, Sule wuxuu qaatay tallaabadiisa xigta inuu ka ciyaaro Eintracht-Jugend oo ah gacanta ugu yar Eintracht Frankfurt kooxda dhalinyarada Markii uu ogaaday inuu u guuray meel ka baxsan guriga, labadaba Sule iyo waalidkiis waxay u baahdeen in ay maareyn karaan masaafada sida Eintracht wakhtigaas ma aysan haysanin iskuul ku haboon ama adeegga gaadhiga. Sida laga soo xigtay Niklas Sule;
"Waalidiintayda si toos ah ayaa si toos ah iigu si toos ah ii soo xaadiray dugsi kadibna waxaan ku waday gaadiidka saacadaha cakiran ee Riederwald. Taasi inta badan waxay qaadatay saacad kasta. Waxay ahayd walaac u ah waalidkeeyga. "
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Waddada Weyn
Niklas ayaa markii ugu danbeysay qaatay tallaabadii mustaqbalka ee mustaqbalka dhalinyarada. Waxa uu ku biiray kooxda dhalinyarada, SV Darmstadt 98 iyada oo aan la hubin gaadiidka. Maadaama uusan wali si toos ah u raaci karin baska, Sule wuxuu u sheegay Darmstadt bilawgii inuu ahaa inuu kaliya sii joogi doono badhka sanadka.
Ugu dambeyn, dhibaatooyinka hoygiisa iyo gaadiidka ayaa la xaliyay markii uu ku biiray 1899 Hoffenheim sanadka 2010. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Sule uu kalsooni ku qabo inuu ka tago hooyadiis iyo aabihiis. Hoffenheim, Sule waxay si dhaqso ah uga sarreysiisay dhamaan dhalinyarada oo ay ugu mahad celinayaan bandhigyada cajiibka ah.
Sababtoo ah wuxuu sii kordhay mid aad iyo aad u xoog badan intii udhaxeysay da 'yaryar, Hoffenheim ayaa hoggaanka kooxda u ogolaatay Sule in ay sannadkan ka soo wareegto kooxda Youth. Tani macnaheedu waa "laba-dallacaad " Jarmalka. Markii da'da 17, nasiib wanaag Sule ayaa ugu yeeray kooxda koowaad ee 1899 Hoffenheim. Tani waxay sidoo kale ahayd waqti uu ka soo baxay hoyga kooxda si uu ula noolaado qoys marti u ah nus sano.
Goorta Go-goyntu socoto:
Waxaa jira noocyo kala duwan oo dhaawacyo kubada cagta ah. Dhaawaca ma jiro ciyaaryahan kubad sameeyaha ah ayaa doonaya marxaladdooda mustaqbalka hore Xiriirka qallafsan. Sule wuxuu dhab ahaantii dhaawac u geystay markii uu ahaa 19 sano jir, intii uu ciyaarayay kulankiisii ​​Eintracht Frankfurt.
"Bilowgii, way adagtahay in la shaqeeyo. Laakiin walaalkay iyo aabahay ayaa i siin kara raaxo iyo dhiirranaan " ayuu yidhi Sule oo ku hadlayay dib u habeeyntiisa.
Nasiib wanaag, waxyaabo badan ayaa ku dhacay iyada oo aan wax dhib ah ka soo bixin dhakhtarka takhasuska jilibka ee Dr. med. Heinz Jürgen Eichhorn.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Kusoo caan bax
Iyadoo ka fariistay Per Mertesacker, meel bannaan oo ka mid ah difaaca Jarmalka ayaa la sameeyay. Sidaa daraadeed waxaa jirey baaritaankan oo raadinaya daafaca dambe ee Jarmalka. Tani waxay ahayd markii magacyadii Antiono Rudiger Niklas Sule ayaa noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa daafaca da'da yar.
Sule waxaa loo tixgeliyey difaac buuxa oo leh awood isku dhafan oo awood leh, farsamo iyo fikrado nacas ah. Imtixaanka saxda ah ee qiimaha wuxuu yimid markii uu u horseeday xulkiisa Germany inay ku guuleystaan ​​ciyaaraha Olombikada 2016 iyo Koobka Confederations Cup ee 2017.
Ka ciyaarista kulamada 33 iyo hogaamiyaha Hoffenheim booska 4th ee Bundesliga ayaa keentay in Sule uu noqdo xubin ka tirsan kooxda Bundesliga xilli ciyaareedkii 2016 / 2017. Horyaalka heerka labaad ee Bayern Munich ayaa ah mid xiiso badan, John Terry beddelka. Tani waa Bayern Munich oo ugu dambeyntii ku guuleysatay tartanka Sule ee 2017.
Ugu dambeyntii, Wiilka Walldorf wuxuu ugu dambeyntii ku biiray ciyaartoy kale oo jarmal oo dahab ah sida: Joshua Kimmich, Timo Werner iyo Julian Brandt. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Marka laga reebo ciyaaryahan kasta oo guuleysta Jarmalka, dhab ahaantii waxaa jira WAG muuqda. Wakhtiga qorista, xiriirka isdaba joogga ah ee cagaha adag wuxuu u dhexeeyaa Niklas iyo Melissa.
Melissa waxay inta badan u muuqataa la saaxiibka saaxiibtinimo ee xafladaha, hawlaha, iyo dhacdooyinka. Waxay marwalba la yaabtay qof walba oo quruxdeeda qurxoon marka ay ka soo qayb gashay Oktoberfest, oo ah Volksfest ugu weyn adduunka oo sannad kasta lagu qabto Munich, Bavaria, Germany.
Sida laga soo xigtay wargeyska Jarmalka, waxaa la soo wariyay in labadii gabdhood ee loo yaqaan 'lovebirds' ay bilawday sanadka 2014 intii uu ku sugnaa 1899 Hoffenheim. Sannadka sanadka oo dhan, labada jacaylku waxay ku kalsoon yihiin naftooda.
Waa arrin kaliya wakhtiga ka hor inta aan la arkin arooska.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaatid Niklas Sule noloshiisa gaarka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho buuxda shakhsiyadiisa.
Deep Digniinta Dadka:
Niklas Sule waa qof jecel inuu feejigno faahfaahinta ugu yar iyo dareenkiisa qoto dheer ee bani-aadminimo wuxuu ka dhigaa saaxiib saaxiibo gaar ah dadka gaar ahaan dadka naafada ah. Hoos waxaa ku qoran sawirka Niklas tababarka qaar ka mid ah taageerayaasha gaarka ah.
Ku laabashada Naadiga Dhalinyarada:
Niklas Sule wuxuu waligiis ku jiri doonaa buugaagta dahabka ee kooxda dhalinyarada ee Walldorf halkaas oo uu xirfadiisa ku bilowday. Wuxuu ku soo laabtay kooxda isagoo siinaya lacago iyo waqtigiisa. Hoos waxaa ku qoran Sule oo la socda caruurta iyo shaqaalihii dhalinyaradii hore ee SV Rot-Weiß Walldorf.
"Waan garanayaa xididadaydii, meesha aan ka imid, "Ayuu yiri Sule.
Nikals Sule Xiriirrada Qoyska:
Asideingka bulshada, Qoyska ayaa sidoo kale muhiim u ah Niklas maaddaama uu weli xiriir dhow la leeyahay waalidkiisa iyo walaalka oo keliya.
Waqtigan xaadirka ah, labada walaalo ah ayaa dib loogu soo celiyay Jarmalka. Fabian waxa uu hadda ku dhameystirayaa tababar shaqo ee SAP ee Walldorf, oo ah gurigiisa toddobaad ee shirkadda SAP ee ugu weyn dunida.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Asaasida kubbada cagta kubbadda cagta, Sule waxay sidoo kale ka dhigeysaa sidii golf kubadeed. Si kastaba ha ahaatee, wuu ogyahay in Golf uu sahlan yahay in uu wax barto oo aan macquul aheyn in uu Master-ka yahay.
Wuxuu jecel yahay duurjoogta:
Niklas Sule waa qof ku deeqa waqtigiisii ​​oo u diyaara duur joogta. Waxa uu kaalin firfircoon ka qaataa jacaylka uu u qabo xagjirnimada iyo yaxaaska. Sawirka hoose ee soo socda, hooyada u dhalatay hooyadood ma aysan ku faraxsaneyn daafaca reer Germany.
Niklas Sule Hooyo sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyinka Xirfadaha Joogtada ah
Turkiga wuxuu isku dayay inuu xadido Sule:
Niklas Sulle ayaa mar uu shaaca ka qaaday in Turkiga uu kula soo xiriiray inuu u ciyaaro iyaga sababo kale sababtoo ah "Magaciisa wuxuu u dhawaaqaa Turki'.
Isagoo ka hadlaya isku dayga, Taageerida Reddit tani waxay leedahay in la yidhaahdo;
"Haa, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay shaqadooda. Haddii aad tahay FA-ga oo aan soo saarin karti-xirfadeed, waa inaad qabsataact ciyaaryahan walba oo leh khibrad sare oo laga yaabo in uu kuu ciyaaro. Xaaladaha qaarkood, waxaa dhici karta in ay ka shaqeyso. Sule kiiskiisa, ma shaqeynin. "
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada nooca Niklas Sule Sheeko dheeri ah iyo faahfaahinta sawirrada aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga
Bayern Munich Taariikhda Kubada Cagta
Hansi-Dieter Flick Sheeko Carruurnimo Plus Xaqiiqooyin Taariikh nololeed aan loo baahnayn
Javi Martinez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Serge Gnabry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Xogta
Leon Goretzka Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Medhi Benatia Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Corentin Tolisso Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Mario Mandzukic Sheeko Xeeldheer Xogta Wada-noolaanshaha Xogta
Mario Gomez Sheeko caruureed iyo xaqiiqooyin aan la xariirin
Taariikhda la beddelay: Noofambar 9, 2017
Manuel Neuer Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Pep Guardiola Sheeko dheeraad ah Sheeko xariif ah
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 3, 2020
Taariikhda la beddelay: Agoosto 27, 2020